Posted by Arjun Thapa at Sunday, January 26, 2014 Links to this post Labels: बिज्ञान तथा प्रविधि
दक्षिण कोरियाली स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी सामसुङले घुमाउरो स्त्रिmन भएको विश्वकै पहिलो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । ग्यालेक्सी राउण्ड नाम दिइएको उक्त स्मार्टफोनको स्त्रिmन ५.७ इन्चको रहेको छ । अर्को वर्ष घुमाउरो स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने एल जी ले घोषणा गरेको भोलिपल्टै सामसुङले सबैलाई चक्मा दिनेगरी यो घुमाउरो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो । स्मरण रहोस् एल जी र सामसुङ दुबैले लचिलो घुमाउरो स्त्रिmन भएको टेलिभिजन समेत निर्माणमा जुटिरहेका छन् ।
Posted by Arjun Thapa at Wednesday, October 09, 2013 Links to this post Labels: बिज्ञान तथा प्रविधि
रोहित चन्द सर्वाधिक महंगा नेपाली फुटबलर
डिफेण्डर रोहित चन्द सर्वाधिक महंगा नेपाली फुटबलर बनेका छन्। इण्डोनेशियाको लिग खेल्दै आएका रोहित कीर्तिमानी मूल्यमा मच्छिन्द्र क्लबमा आवद्ध भएका हुन् ।
४ महिनाका लागि मच्छिन्द्रमा आवद्ध भएका उनले मासिक १ लाख ५० हजार पारिश्रमिक पाउनेछन् । यो नेपाली फुटबल खेलाडीले अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक हो ।
मच्छिन्द्रले यसलाई इंग्ल्याण्डका पूर्व कप्तान डेभिड वेकहृयामको जस्तै सम्झौता भनेको छ । ‘यो डेभिड वेकहृयामको जस्तै डिल हो’ क्लबका उपाध्यक्ष विप्लव गौतमले भन्नुभयो-’विदेशी क्लबहरुबाट प्रस्ताव नआएसम्म रोहितले हाम्रो लागी खेल्नेछन् । उनले मासिक डेढ लाख पाउनेछन् । टिमले राम्रो गरे बोनस पनि पाउने छन् ।’
Posted by Arjun Thapa at Wednesday, October 09, 2013 Links to this post Labels: खेलकुद
निद्रा नलाग्ने समस्या छ ? त्यसो भए यसो गर्नुहोस्
व्यक्ति स्वस्थ रहन भरपूर निद्रा लिनु निकै आवश्यक हुन्छ । राम्ररी निदाउन पाइएन भने जिउ गह्रौँ हुन्छ । नियमित रुपमा निद्रा खल्बलिने वा पर्याप्त समय सुत्न नपाउने हो भने मानिस विरामी पनि पर्न सक्छ । कतिपयलाई निद्रा नपर्ने समस्या हुन्छ ।
अनिद्राको समस्याबाट पिरोलिएका मानिसहरु निदाउने उपायको खोजी गर्दै न्रि्रा लाग्ने विभिन्न औषधि समेत सेवन गरिरहेका हुन्छन् । यदि तपाइँमा पनि निद्रा नलाग्ने समस्या छ भने झ्वाट्टै औषधि खानतिर नलाग्नुस् । तपाइँले यसो गर्नुभयो भने अनिद्राको समस्या दूर हुनेछ ।
- प्याजको बाहिरी बोक्रा फ्याँकेर त्यसलाई पिँधेर रस निकाल्नुहोस् । प्याजको दुइ चम्चा रस दिनहुँ पिउने गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाइँलाई निद्रा पर्छ ।
- सुत्नु भन्दा दुइ घण्टा पहिले बेलुकीको भोजन गर्नुपर्छ । कहिल्यैपनि खाना खाने बित्तिकै सुत्ने नगर्नुहोस् । बेलुकाको खाना हल्का खानुहोस्, धेरै खानेकुरा नखानुहोस् । बेलुकीको खाना बढि खानाले निद्रा बिथोलिन्छ ।
Posted by Arjun Thapa at Saturday, October 05, 2013 Links to this post Labels: स्वास्थ्य
कागतीलाई यसरी प्रयोग गरे फाइदै फाइदा…
कागती हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने खाद्य पदार्थ हो । कागतीलाई खानामा तथा सलादमा बड प्रयोग गर्ने गरिन्छ भने पेय पदार्थमा समेत मिसएर प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यस्तै, कागतीलाई औषधीका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । विभीन्न रोगहरूमा घरेलु औषधी बनाउनका लागी प्रयोग गर्न कागतीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । कागतीका केहि औषधीय गुणहरू र तीनको प्रयोग विधी यस्ता छन्:
१. पेटको रोग: कागतीको रस सनाई पत्ती त्रिफला (हर्रो बर्रो अमला) र विरेनुन पिँधेर चनाको दाना बराबर गोली बनाएर बिहान-बेलुका दुईदुई गोली चिसो पानीसित सेवन गरे पेटसम्बन्धी सबै रोगमा आराम गर्छ ।
२. अजिर्णमा: खान मन नलाग्ने, खायो भने वमन हुने समस्या आएमा कागतीको रसमा जाइफल घोटेर चाटे लाभ गर्दछ । दुई फ्याँक पारेको कागतीको सुठो र सिँधेनुन छरी आगोमा तताएर चुस्यो भने अजिर्ण रोगमा जाती गर्छ ।
Posted by Arjun Thapa at Thursday, October 03, 2013 Links to this post Labels: स्वास्थ्य